ABBA QABEENYAA OROMOO DIYAASFOORAAF WAAMICHA .. – Kichuu
HomeAfaan OromooABBA QABEENYAA OROMOO DIYAASFOORAAF WAAMICHA ..
ABBA QABEENYAA OROMOO DIYAASFOORAAF WAAMICHA GOCHUUN DURA DANQAALEE OROMOO BAQACHIISE KARAARRAA KAASAA!
Obbo Lammaa Magarsaa sabboonummaa Pirezedaantii Oromoo kana dura jiranirratti argee hinbeekne sirratti arguukoof nan gammada. Haasaa ati gootu mara faana bu’een hordofa; dhuunfaakoottis nan xiinxala. Xiinxallikoo iddoo lamatti qoodee na agarsiise. a. Sirna bututtuufi baduuf jettu kana lafarra tursiisuuf akka ati afaan tolaafi sabboonummaan saba guddaa kanatti gadi baate yookaan. b. Dhugaadhumatti hidda Oromummaarraa kaatee saba miidhame kana gama dandeesseen utubuuf lubbuukeerratti murteessitee waan kaate fakkaata. Yoo isa lammataa kanadha taatee anillee siduukaa du’uuf waadaaan seena. Mee haasaakee har’aa kan dhimma diyaasfooraa dubbatteetti haadarbu. Akka Oromoo tokkootti hojii Dr. Guddataa biyya Arsii keessatti godhaa jiruuf nan galateeffadhas; hojiin qabatama akkasiis nama boonsa. Abbaa qabeenyaa Oromoo qofa utuu hintaane, beektota sammuu faranjii jijjiranii biyya faranjii beekumsaan ijaaran Oromoon kumoota hedduun akka qabnu ani ijakoon argeera. Haata’u malee gaaffiifi yaada muraasan Pirezedaantii Biyya Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaaf qabu muraasaa TAAJJABBII’n akka kanaa gadiin kaa’a.
Misoomni jalqabaa biyya qabaachuudha. Biyyaafi saba akka saamamne xiqquma ija saaqqadhu ilaalimee; shira wayyaaneen meeqatu dhume? meeqatu hidhaa jira? yeruma ati amma dhaabbattee haasa’aa jirtu kanallee meeqatu du’aafi Tigireen adamsamee nyaatamaa jira laata? Kana karaa hedduun odeeffannoon sigahee atis akka beektu shakkii hinqabu. Kanaafuu, Oromoo dachee Oromiyaa dachee Amerikaatti qixxeessan hedduu diyaasfooraa keessaa waan qabduuf animmoo Tigiree akka ofirraa geggeessituufan waamicha siif dabarsa. Gaafa sana siinillee akka Maandellaa Afriikaa kibbaatti, Akka Luther Amerikaatti sijajaa seenaakee barreessinee dhalootaaf ol keenya.
Abbootii qabeenyaa Oromoo hedduun biyya Oromoo dhufanii akka gufatanii deebi’an quba qabdaa? Maaliis seete? GUBBOO/MATTA’AA-Ati tarii isa kana tokko tokkoon keessa gadi buutee hinbeektu ta’a. Maallaqa qaxxaamuraan gubboo diyaasfooraarraa saamanii kan achirratti fooqii ijaaraa jiran TAAJJABBIIN tokko tokkoon siif saaxiluu danda’a; atis numa beekta. Uummmanni diyaasfooraa kun amal biyya alaa kan caasaan kamillee mallattoosaa waraqaarra namaaf kaa’uuf maallaqa/gubboo hinfudhanne gidduu jiraatee bareera. Kanaaf waan haqaa jaallata. Achimmoo akkuma anis atis waliin beennu kijibatu biyya sanatti baayyata. Karaa nagaafi qajeelaan uummanni keenya irra deemee hojjetu jiraa?
Akka TAAJJABBII’n madda harkaa qabutti abbaa qabeenyaa diyaasfooraa dhiisiiti abbootii qabeenyaa biyya keessaa ilmaan Tigray/Security’n morma qabee akka maallaqa harkaa funaanaa oolu quba siqabaachisa. Hattoonni hojiikooti jedhanii abbootii qabeenyaa Oromoo saamaa oolan jiru; kan irraa maallaqa bu’achuun of ijaaraa jiran guutan; isaan kun warruma maqaaf heera biyya sanaa jalatti bulanidha. Mee waan akkasiirratti caasaakee diriirsuun qoradhuu karaarraa kaasisiiti abbootii qabeenyaa kanaaf karaa mijataa uumiif.
Oromoon biyya sanatti qabeenya qabu; Qeerroo deggaraa jira jechuudhaan namoota hedduu akka mana hidhaa buusan quba qabdaa? Maqaa tarreessuun nababraachisaa? Kun tooftaa Wayyaaneen ittiin dinagdeen Oromoo cabsaa jirtu ta’uu beektaa laata? Namoota keenyaa dinagdeen gaaf aol ka’an ABO gargaaraa jira; Qeerroo Gargaaraa jira….hidhata shororkeessaa faana qaba jechuun wayyaaneen akka goolaa jirtu quba qabdaa laata? Mee wantoota fokkisoo akkasii kana akkam gootee karaarraa kaasteetu abbootii qabeenyaa diyaasfooraaf waamicha gochuu dandeessa?
Dhumarratti silaa yookaan si ajjeesuu yookaan biyyaa baataati seenaakee ammumaan ka’ii bareechadhu. Yoo Oromoof amanamtee kan dalagdu taatee Wayyaaneen akkuma kana dura Obbo Alamaayyoo Atoomsaarratti gooteen akka sin miine kadhannaakoo godhu keessaattan siyaadadha. Yookaan ammoo siwareersanii akkuma Juneddinfaa kana kadhattuufi soroobduu diyaasfooraa keessaa akka jarri kun singoones sodaan qaba. Kanaafuu, akkuma arrabaafi sabboonummaa gaariin gadi baate kanatti Qabsoo Oromoo alaafi keessa jiru utuu hin abaariin (keessumaa sidhaa ABO abaaruu dhagahee hinbeeku–silaa badinkee gaafa sana-Sabni ati geggeessaa jirtu sun hunduu ABO dha beki), sidhaa hayyoota abaaruu hindhageenye; sidhaa hiyyeessota tuffatu hin argine; hafuura nagaatu sirra mul’ataa jira. Keessumattuu ammoo kanan siif dhaamu, biyyi sun dhumarratti harka Oromoo akka galu beeki; Karaa kamiinuu barri itti Oromoon biyya sana walitti qabee bulchu fagoo miti. Kana gochuuf humna ala kanaa qilleensa’u utuu hintaane, uummatichumakee sanatu kana fida. Kanaafuu, yaadakee bifa madaalawaan deemsisi. Maaltu beeka; BILSIUMMAAN OROMIYAA hunda keenya gaaf tokko iddoo tokkichatti walitti qaba ta’a!
Beekan G Erena, Adoolessa 2017, BOston USA.
Ergaa Diyaasporaa Oromootif Pirezidaantii MNO, Kab. Obbo Lammaa Magarsaa dabarsan.
Sirna eebbaa Hospitaala Walii Galaa fi Kolleejjiin Meedikaalaa Nageellee Arsii guuyyaa kalleessa gaggeefame irratti argamun Pirezidaantii MNO, Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa haasaa taasisan keessatti ergaa Diyaasporaaf dabarsan sur-sagalee kana irraa hordofaa.
Obbo Eda’oo Odaa suuraan seenaan isaa maal fakkaatti laata?